မြန်မာဘာသာစကား | Udemy
Teaching & Academics Language Learning Burmese Language
အခြေခံနှင့် အလယ်အလတ်အဆင့် လေ့လာသူများအတွက် အခြေခံမြန်မာဘာသာစကားသင်ရိုး
Created by Htay Win
ဤသင်ရိုးတွင် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများသည် အသံစနစ်များ၊ အသံထွက်များ၊ နေ့စဉ်သုံး အသုံးအနှုန်းများ၊ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံနှင့် မေးခွန်းပြုလုပ်ပုံများကို လေ့လာရပါမည်။
ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများနှင့် အရည်အသွေးရှိသော အွန်လိုင်သင်ရိုး
ကျောင်းသားများက ကျွန်တော်၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်လုပ်ရုံပါပဲ။
စာသင်ချိန်တစ်ခုပြီးတိုင်း ကျောင်းသားများသည် ကျွန်တော်၏ သင်ခန်းစာများကို လေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။
ဤသင်ရိုးကို ပညာရေး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အခြေခံမှ အလယ်အလတ်အဆင့် မြန်မာဘာသာစကားကို လေ့လာချင်သော ကျောင်းသား/သူများအတွက် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသင်ရိုးသည် နောက်အဆင့်များကို တက်လှမ်းရန် လိုအပ်သော အခြေခံ ဗဟုသုတများကို အဓိက ဦးတည်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာစကား လေ့လာရာတွင် အသံစနစ်ကို လေ့လာရန်အတွက် သရသင်ကေတအသီးသီးကို လေ့လာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤသင်ရိုးတွင် သရသင်ကေတ အမျိုးမျိုးကို လေ့လာခြင်းဖြင့် မြန်မာဘာသာ၏ အသံအမျိုးမျိုးကို လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။ အသံထွက်စနစ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီဆိုလျှင် ဝါကျတည်ဆောက်ပုံများကို လေ့လာရာတွင် ပိုပြီးလွယ်ကူသွားပြီး ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများသည် အသံအတက်၊အကျ၊ အသံထွက်၊ အသုံးဝင်သော ဝေါဟရများနှင့် အသုံးဝင်သော သဒ္ဒါတည်ဆောက်ပုံများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာစကားတွင် အသံစနစ် သုံးမျိုးရှိပါသည်။ ထိုသုံးမျိုးမှာ အသံတို၊ အသံရှည်နှင့် ပိုပြီးအသံမြှင့်နှင့်အတူ အသံရှည်ဖြစ်ပါသည်။ အသံစနစ်ပေါ်အခြေခံပြီး စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ်များသည် လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
အသံထွက်ကို လေ့လာရာတွင် မှန်ကန်သည့် မြန်မာအသံထွက်များ ရရှိရန် အဂ်လိပ်ဘာသာစကား၏ ကာရန်တူ စကားလုံးများကဲ့သို့ ကာရန်တူစနစ်များကိုလည်း သင်တို့သည် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အသုံးဝင်သော စကားလုံးများကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် မြန်မာဘာသာစကားကို စာသင်ချိန်များတွင် လေ့လာနေစဉ် သင်သည် လေ့ကျင် မြန်မာစကားကို လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
အခြေခံသဒ္ဒါတည်ဆောက်ပုံတွင် သင်သည် ရိုးရိုးဝါကျ၊ အငြင်းဝါကျ၊ မေးခွန်းများကို ဝါကျတစ်ခုစီတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင်သည် လိုအပ်သော ကာလများ၊ စကားပြောတွင် မေးခွန်းများ ပြုလုပ်ရန် WH မေးခွန်းများကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ မြန်မာစကားကို လေ့လာနိုင်စဉ် တခြားမြန်မာစကား လေ့လာသူများနှင့် အသုံးဝင်သော စကားစုများကို သင်သည် လေ့လာနိုင်သည်။
မြန်မာစကားကို လေ့လာလျှင် မြန်မာလူ့အဖွဲအစည်းကို နက်နက်နဲနဲနားလည်ရန်အတွက် မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်လိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွါးရေး လုပ်မည်ဆိုလျှင် သင်၏ စီးပွါးရေး အောင်မြင်မှုအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ဘာသာစကားကို လေ့လာခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်ခြင်းသည် စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ရန်အတွက် အရေးပါပါသည်။
နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ မြန်မာစာသင်ကြားခြင်း အတွေ့အကြံပေါ် အခြေခံ၍ ကျောင်းသား၊သူများ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလည်ရန်၊ တတ်မြောက်ရန်အတွက် ဖတ်တီးထားပါသည်။ ဆရာသင်ပေးသော တစ်ခန်းချင်းစီကို နေ့စဉ်မှန်မှန်လေ့ကျင့်သွားလျှင် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများသည် အချိန်တိုအတွင်းတွင် မြန်မာဘာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်နိုင်လိမ့်ဟု ဆရာယုံကြည်ပါသည်။
ဆရာဖန်တီးမည့်နောက်သင်ရိုးများတွင်လည်း ဘာသာစကား၏ နောက်တစ်ဆင့်ကို ထည့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲသို့ အခြေခံမှစပြီး တစ်ဆင့်ချင်းလေ့လာလျှင် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများသည် အခြေခံပိုင်ပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်များကို လွယ်ကူစွာ ကျော်ဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယ္ခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး ပြောင်းလဲမှုများကို ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကတို့မှ အစိုးရများနှင့် ပြည်သူပြည်သူများက စိတ်ဝင်စားနေကြပါသည်။ အပြောင်းအလဲများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အကူအညီများလည်း ပေးချင်ကြသည်။ ထိုသို့ အောင်မြင်သော အပြောင်းအလဲများဖြစ်လာရန်၊ ထိရောက်သော အကူအညီများလည်း ဖြစ်လာရန် မြန်မာလူမျိုးများ၏ အသေးစိတ် ယဉ်ကျေးမှုစရိုက် လက္ခဏာကို နည်းလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ နားလည်နိုင်ရန်အတွင် အများစုသည် မြန်မာဘာသာစကားကို နည်းလည်တတ်ကျွမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘာသာစကားကို နည်းလည်မှသာ မြန်မာလူမျိုးများ၏ ဓလေ့စရိုက်များကို အသေအချာ လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထား၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များကို အတွင်းကျကျ သိမှသာလျှင် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သို့မှာသာ သင်တို့၏ အကူအညီများသည် ထိရောက်သော အကူအညီ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
မြန်မာဘာသာစကားကို အခြေခံမှ အလယ်အလတ်အဆင့် လေ့လာချင်သူများအတွက်
အခြေခံနှင့် အလယ်အလတ်အဆင့် လေ့လာချင်သော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ
3 sections • 16 lectures • 3h 52m total length
Vowel symbol (အာ)
Vowel symbol (အာ) and some useful phrases
Vowel symbol (အု) (u)7 lectures • 1hr 35min
Vowel symbol (အု) (u)
Vowel symbol (ကျ) kya
Vowel symbol (အွ) (au)
Vowel symbol (အှ) (a)
Vowel symbol (ကျွဲ) (Awe)
Vowel symbol (မျှ) (Mya)
Vowel symbol (အွှ) ( Aw)
Vowel symbol (အေ့) (e)5 lectures • 1hr 19min
Vowel symbol (အေ့) (e)
Vowel symbol (အော့) (aw)
Vowel symbol (အန်, အမ့်) (An)
Vowel symbol (အို့) (o)
Professional Burmese and English teacher
Htay Win isaprofessional Burmese and English teacher withadegree,apost-graduate diploma and international teaching certificate such as TESOL.
He works for Greatest Power and Language and Justlearn teaching platform. And , he isaco-founder of Iscsyangon online training for the online teaching. Then, he as an author of E-books through Amazon platform.